သူမအစားအသောက်တွေ အားရပါးရစားနေတဲ့ ပုံတင်လိုက်တာကို အထင်မလွဲဖို့ ပရိသတ်တွေကို တောင်းပန်လာတဲ့ ခြူးလေး – Cele Posts
မည်သည့် ဇာတ်ရုပ်ကို မဆို အ ကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ ပရိသတ် တွေ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့မှာ မွေးဖားခဲ့တဲ့ ရခိုင်မလေး ခြူးလေးကို ခြူးခြူးလို့လည်း ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ သူမက အစားအ သောက်ဆိုရင် စပ်တဲ့ အစားအစာတွေကို ကြိုက်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ခြူးလေးဟာ မ နေ့က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ” အစားသောက်တွေ တင်လို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော် …. နယ်ကနေ တကူးတက လှမ်း မှာပြီး ပို့ပေးတဲ့ ချန်ဖူးလေးကို ကျေးဇူးတင်လို့ပါ ရှင့် … တကယ် အရသာ ရှိတယ် …” ဆိုပြီး အစားအသောက် ပုံများနှင့်တွဲ ကာ ပိုစ့်တင်ထားခဲ့ တာကို ပရိသတ်ကြီးပါ စားချင် သောက်ချင် စိတ်ဖြစ်သွားအောင် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမအစားအသောကျတှေ အားရပါးရစားနတေဲ့ ပုံတင်လိုကျတာကို အထငျမလှဲဖို့ ပရိသတျတှကေို တောငျးပနျလာတဲ့ ခွူးလေး
မညျသညျ့ ဇာတျရုပျကို မဆို အ ကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျသလို သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခွူးလေးရဲ့ ပရိသတျ တှေ ရှိလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
သူမဟာ MRTV4ဇာတျလမျးတှဲ တှေ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုတှေ ရိုကျကူးထားသူဖွဈပွီး တဈတော့ မှာလညျး ဘယျဇာတျရုပျကို မဆို အကောငျးဆုံး ပီပွငျအောငျ ဆော့ကစား နိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ နရော တဈနရောကို အခိုငျအမာ ရယူထားနိုငျသူ တဈယောကျပါ။
ရခိုငျပွညျနယျ သံတှဲမွို့မှာ မှေးဖားခဲ့တဲ့ ရခိုငျမလေး ခွူးလေးကို ခွူးခွူးလို့လညျး ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွပါသေးတယျ။ သူမက အစားအ သောကျဆိုရငျ စပျတဲ့ အစားအစာတှကေို ကွိုကျတယျလို့ ဆိုထားတဲ့ ခွူးလေးဟာ မ နကေ့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာမှာ ” အစားသောကျတှေ တငျလို့ စိတျမဆိုးပါနဲ့ နျော …. နယျကနေ တကူးတက လှမျး မှာပွီး ပို့ပေးတဲ့ ခနျြဖူးလေးကို ကြေးဇူးတငျလို့ပါ ရှငျ့ … တကယျ အရသာ ရှိတယျ …” ဆိုပွီး အစားအသောကျ ပုံမြားနှငျ့တှဲ ကာ ပိုဈ့တငျထားခဲ့ တာကို ပရိသတျကွီးပါ စားခငျြ သောကျခငျြ စိတျဖွဈသှားအောငျ ဖျောပွ ပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
ချမ်းမြေ့ဆိုတဲ့ နာမယ်နဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင် ဘဝကနေ ခုအသက် (၄၃)နှစ်ထိ လုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုတောင် စွန့်လွှတ်ပြီးသားမို့ BLACK LISTလုပ်လည်းဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း